8.4.2021 မှ 14.4.2021 အထိ ( ၇ )ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း - Padaethar
ကျန်းမာရေးမှာတော့ ဒူးနာတတ်ပါတယ်။ အထိုင်အထမကောင်း ဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများမီးယပ်ဆိုင်ရာရောဂါတွေကို သတိထားပါ။ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်တိုင်တွင် အဆင်ပြေသော်လည်း အနီးကပ်သူများ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်းအပေါ် အထောက်အကူ ပြုရမည်။
မိမိ၏စေတနာကို ထိရောက်စွာပြသခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ လူအများရဲ့ ချစ်ခင်ခြင်းတွေကိုခံရတတ်ပါတယ်။လူအများအကြားမိမိကောင်း သတင်းတွေပျံ့နှံကျော်ကြားတတ်ပါတယ်။အိမ် ကိစ္စတွေ၊နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေအတွက်ပူပန်နေရတတ်ပါတယ်။ငွေအဝင်ကြမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဆုကြေး၊ဘောနပ် ဆိုတာမျိုးရလွယ်ပါတယ်။
အလုပ်အော်ဒါတွေများများရလွယ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည် နေမည်။ ချစ်ရသူ ကိုဖွင့်ပြောဖို့ မတွန့်ဆုတ်နေသင့်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့လေးစားအထင်ကြီးခြင်းကိုရလိမ့်မယ်။ ချစ်ခြင်းတရား ပိုမိုခိုင်မြဲလာတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးမှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံမှုတွေကြောင့်အနှောက် အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါ တယ်။
ဒီကာလအတွင်းလုပ်ငန်းသစ် တွေကိုအစပျိုးလို့ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ၊ စက်ကားယန္တရားနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ အထူးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးက ရေချိုးရာ ကနေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းထဲချော်လဲတာမျိုးအလွန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ခြင်၊ကင်း၊မြွေ စတာတွေရဲ့ ကိုက်ခဲခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။ဆရာသမားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အရောင်း အဝယ်ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရပါလိမ့်မယ်။စာချုပ်စာတန်းကိစ္စမှန်သမျှဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ ကာလပါပဲ။
ရေကန်အဟောင်း တွေပြုပြင်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးကိုပြုပြင်ခြင်းများဆောင်ရွက်ဖြစ်မည်။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ရသောအလုပ်တွေ ကအောင်မြင်မည်။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှန်မှန်ချနိုင်လေကောင်း လေပါပဲ။ကံကောင်းနေသောအချိန်ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ဝတ်ရတနာဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊စက်ကားဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။
အချစ် ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းတဲ့ ကာလပါပဲ။ သာယာသောအိမ်ထောင်ရေးဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မိမိကပါ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လုပ်မိ၊လေ့လာမိနေတတ်ပါတယ်။
ယတြာ ………သရဏဂုံသုံးပါးကိုနေ့စဉ် သက်စေ့ရွတ်ပွားပါ။
ဒီကာလမှာလူမှုရေး၊သာရေးနာရေးတွေကြောင့် ငွေကုန်နေရတတ်ပါတယ်။ သားသမီးအတွက်ငွေကုန် စရာပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးပူဆာတဲ့ဟာတွေကိုဝယ်ပေးနေရတတ်ပါတယ်။
လူများကြားဝင်ရောက်ဖြေရှင်းတာ မျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ မျက်နှာမရဘဲ လူမုန်းများတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အပူရှပ်တတ်ပါတယ်။ ရေကူးမကျွမ်းဘဲ ရေဆော့တာမျိုးတွေကိုသတိရှိလိုက်ပါ။
ကြိုးစားပြီးခရီးဆက်နေပေမဲ့ ထင်သလောက်မထွန်းပေါက်တတ်ပါ။ ငွေ အဝင်နည်းနေလိမ့်မယ် ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ အနေနီးသူတွေရဲ့အားပေးခြင်းတွေကိုတော့ရရှိတတ်ပါတယ်။
အလုပ်ထဲမပျော်ပိုက် သော်လည်း ပေပြီးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ မာနနဲ့ငွေကို လဲယူရချိန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သစ်များစွာကြံ စည်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမိနေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းသောအကြံအစည်မဟုတ်ဘူးဗျ။
ရသည့် နေရာ မှာပဲတည်ငြိမ်စွာ လုပ်နေသင့်ပါတယ်။ ကြိုတင်တွက်ချက်မှု မှန်ကန်လင့်ကစား ပစ္စည်းသိုမှီးထားစဉ် အလေ အလွင့်၊ အပျောက်အရှ များမည်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူကမိမိကိုစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းနေတတ် ပါတယ်။
ချစ်သူကို စိတ်ပျက်သွားအောင်ထပ်မလုပ်မိပါစေနဲ့။ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ နည်းပါတယ်။ အဓိကတော့ အိမ်ထောင်ဘက် နဲ့ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊အခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေဝေးနေရတတ်လို့ပါပဲ။
ဒီကာလမှာ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက်အခြေအနေတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပြဿနာ တွေဖြစ်ရ တတ်လို့ပါပဲ။ သူတစ်ပါး စကားများ နားယောင်ရင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရာမှ အမှားအယွင်းများ ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးကတော့ ဆီးရောဂါဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ဆီးပူ၊ဆီးအောက်နှင့်ဆီးချုပ်ခြင်းများကြုံရတတ်ပါ တယ်။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေ ဆက်တိုက်ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေကိုမယုံပါ နဲ့။မိမိကို လိမ်လည်သွားတတ်ပါတယ်။
အလုပ်မှာလူယုံသတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ အားနာလွန်းသူ တွေဒုက္ခ ရောက် ရတတ်ပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်သူများ ဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရတတ်ပါ တယ်။နွမ်း ပါး သောမိတ်ဆွေများကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေရတတ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ မမြဲတာမျိုး မိမိနဲ့ စကား များပြီး အလုပ်ထွက်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူနဲ့ လွတ်လပ်စွာနေလိုစိတ်ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ရသေးဘဲ အချစ်နယ်မကျွံမိပါစေနဲ့။ မရေရာသောအချစ်တစ်ခုကို မတည် ဆောက်မိပါစေနဲ့။
အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါ တယ်။ ပညာရေးကတော့ အထူးကောင်းပါတယ်။ ကြိုးစားမှုတွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရလာတတ်ပါ တယ်။
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အလမ်းကောင်း တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုလစာကောင်းကောင်းပေးပြီးလာရောက်ကမ်းလှမ်းတာမျိုးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ သူများကိုမခိုင်းဘဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှအဆင်ပြေတိုးတတ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒီကာလမှာတော့အခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနေရမည်။ တကယ့်ကိုပဲ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစား နေရမည်။ မိတ်ဆွေတွေဆီကအကူအညီရခဲပါတယ်။ ညာပေါင်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို သိခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။
ညဘက်သောက်စားမူးယစ်တာမျိုးတွေသတိထားရှောင်ပါ။ ရန်များတတ်ပါတယ်။ ရန်စဟောင်းရှိသူတွေပိုမိုသတိ ထားသွားလာပါ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကငွေပေါ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ လက်ထဲငွေရှိနေရင်ကုန်စရာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
သူများကိုချေးငှားခြင်းတွေကို ဆင်ခြင်ဖို့မှာချင်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေအကူအညီတောင်းမဲ့သူတွေရောက်လာတတ် ပါတယ်။ သားသမီးနဲ့ပက်သက်ပြီး မိဘချင်းစကားများရန်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် မေတ္တာရှေ့ထားပြီးလုပ် ရင်အညံ့နည်းမယ်ဆိုတာသိထားသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။
ကျန်းမာရေးကတော့ သွေးချို၊ဆီးချိုသမားများသတိထားပါ ။ လျှပ်စစ်ကိုင်တွယ်တာမျိုးသတိရှိစေချင်ပါတယ်။ ပဋိပက္ခပြုသူများ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများနှင့် အခြေအတင် ပြောဆိုနေရမည်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူက မိခင်ပမာဂရုစိုက်တာမျိုးခံရတတ်ပါ တယ်။
စကားပြောတာတော့ ချစ်သူနဲ့အပေါက်အလမ်းမတည့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအညံ့နည်း ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ အကူအညီတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့သင်တန်း တွေတတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ………. 8/9/0
ယတြာ ………ရဟန်းတစ်ပါးကို ဖိနပ်ဝယ်လှူလိုက်ပါ။
ဒီကာလမှာမိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေဆီကကောင်းစွာအကူအညီရလာတတ်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ခရီး ထွက်ရ မည်။ ဆရာဟောင်းတွေကိုကန်တော့ခွင့်ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။အစားမှားတတ်ပါ တယ်။
အလကားရသောအစားအစာများကိုသွန်ပစ်ရမှာနှမြော၍စားမိရာကနေရောဂါရလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ် တွေပုံကျလာတတ်ပါတယ်။အလုံးစုံရင်းနှီးမြုပ်နှံထားရတတ်ပါတယ်။ ငွေ၊အချိန်၊လုပ်အား တစ်ယောက်တည်း ကုန်းရုန်းလုပ်နေရတတ်ပါတယ်။
မြင့်သောရာထူးဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရသော်လည်းဖိအားတွေ နဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါ တယ်။ လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေက မိမိဖောက်သည်ကိုလုယူခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။အောက် လက်ငယ်သားတွေ၊ တပည့် တွေကြောင့် မိမိငွေအချီကြီးဝင်တတ်ပါတယ်။
ငွေအဝင်နည်းခဲ့ရင်တောင်မှ အများ၏ အားကိုးခြင်းကိုခံရ တတ်ပါ တယ်။ တစ်ပါးသူဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲနေသောကိစ္စများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်။ အချစ် ရေး မှာတော့ ချစ်သူရဲ့အမိန့်ပေးခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်။ ရှေ့တင်တော့နားထောင်လိုက်ပါ။
နောက်ကွယ်ရာမှာတော့ လုပ်ချင် ရာ လုပ် ပေါ့ဗျာ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာကတောက်ကဆဖြစ်မည်။ အတိတ်ကပြဿနာတွေကိုပြန်မတူး ဆွလိုက် ပါနဲ့။ ပညာရေးအားနည်းနေသည်။ ရလဒ်တွေမကောင်းတတ်ပါ။
( ၇ )ရက်သားသမီးအပေါင်း ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ……
ခံစားနေရတဲ့ အပူသောကတွေ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ………
ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ) 0977 5555 695 ။ 09 44 5555 695
ကနျြးမာရေးမှာတော့ ဒူးနာတတျပါတယျ။ အထိုငျအထမကောငျး ဖွဈရ တတျပါတယျ။ အမြိုးသမီးမြားမီးယပျဆိုငျရာရောဂါတှကေို သတိထားပါ။ အကြိုးဆောငျလုပျငနျးမြား၊ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျမှုမြား အောငျမွငျမညျ။ ကိုယျတိုငျတှငျ အဆငျပွသေျောလညျး အနီးကပျသူမြား အခကျအခဲ ဖွဈနခွေငျးအပျေါ အထောကျအကူ ပွုရမညျ။
မိမိ၏စတေနာကို ထိရောကျစှာပွသခှငျ့ရပါလိမျ့မယျ။ လူအမြားရဲ့ ခဈြခငျခွငျးတှကေိုခံရတတျပါတယျ။လူအမြားအကွားမိမိကောငျး သတငျးတှပြေံ့နှံကြျောကွားတတျပါတယျ။အိမျ ကိစ်စတှေ၊နရောထိုငျခငျးကိစ်စတှအေတှကျပူပနျနရေတတျပါတယျ။ငှအေဝငျကွမျးပါလိမျ့မယျ။ ဆုကွေး၊ဘောနပျ ဆိုတာမြိုးရလှယျပါတယျ။
အလုပျအျောဒါတှမြေားမြားရလှယျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူဝိုငျးဝိုငျးလညျ နမေညျ။ ခဈြရသူ ကိုဖှငျ့ပွောဖို့ မတှနျ့ဆုတျနသေငျ့ပါဘူး။ အိမျထောငျဘကျရဲ့လေးစားအထငျကွီးခွငျးကိုရလိမျ့မယျ။ ခဈြခွငျးတရား ပိုမိုခိုငျမွဲလာတတျပါတယျ။ ပညာရေးမှာတော့ ပတျဝနျးကငျြဆူညံမှုတှကွေောငျ့အနှောကျ အယှကျ ဖွဈရတတျပါ တယျ။
ရကေနျအဟောငျး တှပွေုပွငျဖွဈခွငျး၊ အဆောကျအဦးကိုပွုပွငျခွငျးမြားဆောငျရှကျဖွဈမညျ။ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျလုပျရသောအလုပျတှေ ကအောငျမွငျမညျ။ ဒါပမေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို မှနျမှနျခနြိုငျလကေောငျး လပေါပဲ။ကံကောငျးနသေောအခြိနျဖွဈတာ ကွောငျ့ လကျဝတျရတနာဝယျတာပဲဖွဈဖွဈ၊စကျကားဝယျတာပဲဖွဈဖွဈ ဆောငျရှကျလို့ကောငျးပါတယျ။
အခဈြ ရေးနဲ့ပတျသကျရငျတော့ လကျထပျဖို့တိုငျပငျဆှေးနှေးလို့ ကောငျးတဲ့ ကာလပါပဲ။ သာယာသောအိမျထောငျရေးဖွဈ ပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျဘကျရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့မိမိကပါ ဝမျးသာဂုဏျယူနရေတတျပါတယျ။ ပညာရေး ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျလုပျမိ၊လလေ့ာမိနတေတျပါတယျ။
ယတွာ ………သရဏဂုံသုံးပါးကိုနစေ့ဉျ သကျစရှေ့တျပှားပါ။
ဒီကာလမှာလူမှုရေး၊သာရေးနာရေးတှကွေောငျ့ ငှကေုနျနရေတတျပါတယျ။ သားသမီးအတှကျငှကေုနျ စရာပျေါတတျပါတယျ။ ကလေးပူဆာတဲ့ဟာတှကေိုဝယျပေးနရေတတျပါတယျ။
လူမြားကွားဝငျရောကျဖွရှေငျးတာ မြိုးမလုပျပါနဲ့။ မကျြနှာမရဘဲ လူမုနျးမြားတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အပူရှပျတတျပါတယျ။ ရကေူးမကြှမျးဘဲ ရဆေော့တာမြိုးတှကေိုသတိရှိလိုကျပါ။
ကွိုးစားပွီးခရီးဆကျနပေမေဲ့ ထငျသလောကျမထှနျးပေါကျတတျပါ။ ငှေ အဝငျနညျးနလေိမျ့မယျ ။မိတျဆှတေို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ အနနေီးသူတှရေဲ့အားပေးခွငျးတှကေိုတော့ရရှိတတျပါတယျ။
အလုပျထဲမပြျောပိုကျ သျောလညျး ပပွေီးလုပျဖို့တိုကျတှနျးပါရစေ။ မာနနဲ့ငှကေို လဲယူရခြိနျဖွဈနတေတျပါတယျ။ အလုပျသဈမြားစှာကွံ စညျလုပျဖို့ စိတျကူးမိနတေတျပါတယျ။ ကောငျးသောအကွံအစညျမဟုတျဘူးဗြ။
ရသညျ့ နရော မှာပဲတညျငွိမျစှာ လုပျနသေငျ့ပါတယျ။ ကွိုတငျတှကျခကျြမှု မှနျကနျလငျ့ကစား ပစ်စညျးသိုမှီးထားစဉျ အလေ အလှငျ့၊ အပြောကျအရှ မြားမညျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူကမိမိကိုစိတျဝငျစားမှုလြော့နညျးနတေတျ ပါတယျ။
အလုပျသမားတှေ မမွဲတာမြိုး မိမိနဲ့ စကား မြားပွီး အလုပျထှကျသှားတာမြိုးကွုံရတတျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူနဲ့ လှတျလပျစှာနလေိုစိတျရှိ နတေတျပါတယျ။ ခဈြသူနဲ့ လကျမထပျရသေးဘဲ အခဈြနယျမကြှံမိပါစနေဲ့။ မရရောသောအခဈြတဈခုကို မတညျ ဆောကျမိပါစနေဲ့။
အိမျထောငျရေးမှာတော့ ခြုပျခယျြလှနျးတဲ့ အိမျထောငျဘကျကွောငျ့စိတျညဈနရေတတျပါ တယျ။ ပညာရေးကတော့ အထူးကောငျးပါတယျ။ ကွိုးစားမှုတှအေတှကျ ထိုကျတနျတဲ့ရလဒျတှကေိုရလာတတျပါ တယျ။
ဒီကာလမှာတော့အခကျအခဲမြားစှာကိုရငျဆိုငျကြျောလှားနရေမညျ။ တကယျ့ကိုပဲ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျကွိုးစား နရေမညျ။ မိတျဆှတှေဆေီကအကူအညီရခဲပါတယျ။ ညာပေါငျးနတေဲ့သူငယျခငျြးတှကေို သိခှငျ့ရလာပါလိမျ့မယျ။
ညဘကျသောကျစားမူးယဈတာမြိုးတှသေတိထားရှောငျပါ။ ရနျမြားတတျပါတယျ။ ရနျစဟောငျးရှိသူတှပေိုမိုသတိ ထားသှားလာပါ။ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှကေငှပေျေါဖို့ခကျခဲပါတယျ။ လကျထဲငှရှေိနရေငျကုနျစရာပျေါလာတတျပါတယျ။
သူမြားကိုခြေးငှားခွငျးတှကေို ဆငျခွငျဖို့မှာခငျြပါတယျ။ ရပျဝေးကနအေကူအညီတောငျးမဲ့သူတှရေောကျလာတတျ ပါတယျ။ သားသမီးနဲ့ပကျသကျပွီး မိဘခငျြးစကားမြားရနျဖွဈလှယျပါတယျ။ ဘာလုပျလုပျ မတ်ေတာရှထေ့ားပွီးလုပျ ရငျအညံ့နညျးမယျဆိုတာသိထားသငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။
ကနျြးမာရေးကတော့ သှေးခြို၊ဆီးခြိုသမားမြားသတိထားပါ ။ လြှပျစဈကိုငျတှယျတာမြိုးသတိရှိစခေငျြပါတယျ။ ပဋိပက်ခပွုသူမြား၊ ဆနျ့ကငျြဘကျပွုသူမြားနှငျ့ အခွအေတငျ ပွောဆိုနရေမညျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူက မိခငျပမာဂရုစိုကျတာမြိုးခံရတတျပါ တယျ။
စကားပွောတာတော့ ခဈြသူနဲ့အပေါကျအလမျးမတညျ့တာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးအညံ့နညျး ပါတယျ။ အိမျထောငျဘကျရဲ့ အကူအညီတှအေမြားကွီးရလိမျ့မယျ။ ပညာရေးမှာတော့ အလုပျတဈဖကျနဲ့သငျတနျး တှတေတျဖွဈလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ………. 8/9/0
ယတွာ ………ရဟနျးတဈပါးကို ဖိနပျဝယျလှူလိုကျပါ။
ဒီကာလမှာမိတျဟောငျးဆှဟေောငျးတှဆေီကကောငျးစှာအကူအညီရလာတတျပါတယျ။ မမြှျောလငျ့ဘဲ ခရီး ထှကျရ မညျ။ ဆရာဟောငျးတှကေိုကနျတော့ခှငျ့ကွုံလာပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပါ။အစားမှားတတျပါ တယျ။
အလကားရသောအစားအစာမြားကိုသှနျပဈရမှာနှမွော၍စားမိရာကနရေောဂါရလာတတျပါတယျ။ အလုပျ တှပေုံကလြာတတျပါတယျ။အလုံးစုံရငျးနှီးမွုပျနှံထားရတတျပါတယျ။ ငှေ၊အခြိနျ၊လုပျအား တဈယောကျတညျး ကုနျးရုနျးလုပျနရေတတျပါတယျ။
မွငျ့သောရာထူးဖွငျ့ အလုပျလုပျနရေသျောလညျးဖိအားတှေ နဲ့ရငျဆိုငျရတတျပါ တယျ။ လုပျငနျးတူပွိုငျဘကျတှကေ မိမိဖောကျသညျကိုလုယူခွငျးခံရတတျပါတယျ။အောကျ လကျငယျသားတှေ၊ တပညျ့ တှကွေောငျ့ မိမိငှအေခြီကွီးဝငျတတျပါတယျ။
ငှအေဝငျနညျးခဲ့ရငျတောငျမှ အမြား၏ အားကိုးခွငျးကိုခံရ တတျပါ တယျ။ တဈပါးသူဆောငျရှကျရနျ ခကျခဲနသေောကိစ်စမြားကို စနဈတကဆြောငျရှကျလုပျကိုငျနိုငျမညျ။ အခဈြ ရေး မှာတော့ ခဈြသူရဲ့အမိနျ့ပေးခွငျးကိုခံရလိမျ့မယျ။ ရှတေ့ငျတော့နားထောငျလိုကျပါ။
နောကျကှယျရာမှာတော့ လုပျခငျြ ရာ လုပျ ပေါ့ဗြာ။ အိမျထောငျရေးမှာကတောကျကဆဖွဈမညျ။ အတိတျကပွဿနာတှကေိုပွနျမတူး ဆှလိုကျ ပါနဲ့။ ပညာရေးအားနညျးနသေညျ။ ရလဒျတှမေကောငျးတတျပါ။
( ၇ )ရကျသားသမီးအပေါငျး ကောငျးသောလိုအငျဆန်ဒတှပွေညျ့ဝပါစေ……
ခံစားနရေတဲ့ အပူသောကတှေ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ………
ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ) 0977 5555 695 ။ 09 44 5555 695
မြန်မာနိုင်ငံဘက် သို့သာ မျက်နှာမူနေတယ် ဆို တဲ့ ထူးဆန်းလှသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြဘုရား အကြောင်း